Izandla ezisuka kwiintsimbi kunye nezandla zabo kwinqanaba le-autumn ye-kindergarten kunye nesikolo-Isinyathelo ngeyiteyithi umfanekiso wezobugcisa kunye ne-acorns, chestnuts kunye ne-plastiki
Ixesha lokwindla lixesha elifanelekileyo lokwenza imveliso yezakhiwo zemvelo kunye nabantwana. Ubuninzi bezinto ezifumanekayo ezifumaneka kwiindawo ezinobunjani, ezinamaqabunga, ama-chestnuts, ama-nut, izikhonkwane azikwazi ukushiywa ingqalelo-kwaye enye ifuna ngoncedo lwayo ukuthabatha ubuhle obumangalisayo beli xesha lonyaka. Akumangalisi ukuba ngeli xesha i-kindergartens kunye nezikolo ziqhuba zonke iintlobo zemincintiswano, imiboniso kunye nezifundo zabasebenzi ngesihloko esithi "I-autumn". Ngokuqhelekileyo iziganeko ezinjalo zenziwa ngemisebenzi eyenziwe kwiintumba-enye yezinto ezibonakalayo ezilula kunye nezithengekayo zokwindla. Okokuqala, uhlobo lwe-oblong lwe-acorns luyilungele ukwenza izilwanyana kunye nabalinganiswa bebhali. Okwesibini, i-acorns kunye neeplastiki kuphela ziyakwenza izinto ezahlukeneyo ezingafaniyo nezinye izandla zangaphambili. Emva koko, uya kufumana iiklasi ezihamba ngeenyawo kunye nesithombe ekwenzeni izinto ezithakazelisayo ezivela kwintsimbi kunye nezinye izinto ezilungiselelwe ukuba abantwana bakho bayakuthanda!
Iingcweti ezilula zenziwe ngama-acorns ngezandla zabo kwimixholo ethi "I-autumn" ye-kindergarten, inyathelo ngesinyathelo kunye nesithombe
Masiqale ngeengcweti ezilula ezenziwe ngama-acorns kwimxholo ekwindla, efanelekileyo kwiintsana zase-kindergarten. Ibonisa indlela intaka enhle enokuyenza ngayo ngeesibini ze-acorns, iplastiki kunye nembewu ye-ash. Zonke iinkcukacha zokwenza lo mzobo olula wezandla zabo kumxholo othi "I-autumn" ye-kindergarten ezayo.
Izinto eziyimfuneko zengcweti ezilula kunye nezandla zabo kwimixholo ethi "I-autumn" yomyezo
iinqanawa ezivela kwi-acorns - ii-3.
iiminganiso - ii-3.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo kwi-acrylic elula yezandla kwihloko "I-autumn" ye-kindergarten
Sithatha iingubo ezimbini (enye enkulu, enye encinci) kwaye yenza izimbobo ezincinci nganye. Emva koko siphula umdlalo oqhelekileyo malunga nesiqingatha kwaye uyisebenzise ukudibanisa izibini ezimbini. Kwi-acorn, senza imingxuma emibini kwaye sifaka iimpawu zendawo eqhelekileyo.
Iiplastiki zokulungisa imilinganiselo kwiifoms ezivela kwi-acorns - oku kuya kwenza ukuba umsebenzi wethu uphile. Kwakhona kwiplastiki senza umlomo kunye namehlo kwintaka yethu.
Emva koko kwiplastiki sasiyibhola ibhola elincinci kwaye siyifake ngesigqubuthelo. Silungiselela kwelinye icala imbewu ye-ash, okwenza umsila ngendlela yohlobo. Olunye uhlangothi lufakela umsila kwenziwe ngesandla.
Intaka yethu ikulungele ukuhlala, ihlala ikulungiselela i-cap. Ukwenza oku, ngaphakathi kwinqanaba yokugqibela le-acorn songeza ibhola encinci yeplastiki kwaye silungise iintaka entloko.
Iingcweti zezingane ezenziwe ngamacwecwe ngezandla zabo kwimixholo ethi "I-autumn" yesikolo-isigaba esilandelayo isifundo kunye nesithombe
Kwizandla zaseprayimari ezenziwe ngeentsimbi kunye nezandla zabo kwimixholo ethi "I-autumn" ayifanelekanga ngaphantsi kweso sifana. Kodwa ngokungafani nenguqu yangaphambili yezingane, le klasi yeklasi iyahlukaniswa yinqanaba eliphakamileyo lobunzima. Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nendlela yokwenza umzobo wabantwana bokuqala beengqungquthela ngesihloko ekwindla ngezandla zabo esikolweni.
Izinto eziyimfuneko zengcweti ezisuka kwiintsimbi kunye nezandla zabo kwihloko ekwindla yesikolo
i-acorns - 20-25 pcs.
iphepha elikhohlayo lombala oluhlaza
Umyalelo wesinyathelo ngeyinyathelo kwimisebenzi yabantwana kunye neengqungquthela kumxholo othi "I-autumn" ngezandla zabo esikolweni
Kule klasi yeklasi siya kwenza iididi zeedilibini - uhlobo lwesimboli sokuvunwa kwekwindla. Ngako oko, isibheno sangaphandle sesigqeba sethu siya kuxhomekeka kwinani kunye nobungakanani be-acorns. Siqala ngento yokuba nge-acorn nganye siyisusa ibhonethi yethu kwaye siphononise kunye nepini.
Sidlula umgca wokuloba okanye umnxeba omncinci ngomda owenziwe kwaye ulungisa umda wangaphandle.
Ubungakanani befowuni kufuneka bube malunga namaxesha angama-4-5 aphezulu ngaphezu kweengqungquthela - ke ukuxubusha kwezidiliya kuya kubakho ububele. Ngoxa uncedo lweglue kunye nephepha lifake umgca kumgca ubude obude.
Sifaka imibala enombala obomvu kwaye siwumise ngokupheleleyo.
Siyakha iqela: sihamba ngentambo ye-4-5 kunye, kwaye songeza "iidiliya" ezintsha. Icandelo ngalinye elilandelayo kufuneka libe neengqungquthela ezingaphezulu.
Ukukhwabanisa kwe-free edge kunye nephepha elikhutshiwe.
Ukususela kumaphepha amnyama anemibala ebomvu, sinqumla iqabunga elikhulu lamagilebhisi. Senza imifuno ukusuka kwiphepha elincinciweyo eliqhotyoshelweyo kunye ne-base.
Senza umdiliya: gqwelisa iphepha elidibeneyo ibe ngumthi omude uze uyifake ipencilisi. Hamba ngeeyure eziliqela ukulungisa umlo.
Sifaka amaqabunga kunye nomdiliya kwisiqhamo samadiliya.
Iimveliso ze-autumn zeesonki kunye neentsimbi ngezandla zabo kubantwana - i-class master elula nesithombe
Imisebenzi yezandla zeAmpumn ezenziwe kwi-acorns kunye neekona ngezandla zabo kubantwana nazo zifunwa. Ezi zixhobo zinkulu ngokwenza amanani ahlukeneyo, izilwanyana. Umzekelo, ukusuka kwiklasi elandelayo elula uyakufunda indlela yokwenza i-autumn craft enezandla zakho zeesonki kunye neengqungquthela zabantwana ngendlela yesango lehlathi.
Izinto eziyimfuneko ekwakhiweni kwekwindla yeebhondi kunye neentsimbi ngezandla zabo kubantwana
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo kwi-autumn craft evela kwi-acorns ne-cones kubantwana
Thatha ama-4 amaqabunga amancinci uze uwafake kwindawo enkulu, ukwenza imilenze yesilwanyana. Yenza i-glue kwaye ulinde ukomisa.
Ngosizo lweglue sidibanisa kwisiseko sesibini encinci encinci, eya kuba yintamo yenqatha.
Ingqungquthela engenaye ingxowa nayo ihlanganiswe entanyeni. Ukusuka kwiplastiki senza impumlo kunye namehlo.
Kwakhona kwiplastiki senza umsila omncinci kunye nezimpondo zesilwanyana.
Sidibanisa iinxalenye ezigqityiweyo kwingxenye ephambili yomsebenzi.
Imisebenzi yezenzi zezinto zemvelo (i-acorns kunye ne-chestnuts) - isigaba se-step-by-step master nesithombe
Enye inguqu yezinto zokusebenza ezilula zemvelo - amakhowe avela kwi-acorns kunye ne-chestnuts. Amakhowe anjalo ayenziwe ngokukhawuleza kwaye alula, ngoko ke anokwenziwa kunye nabantwana abaneminyaka emithathu. Iinkcukacha zendlela yokwenza izandla ezenziwe ngabantwana ezisuka kwimpahla yendalo (i-acorns kunye nama-chestnuts) ngendlela yemichiwa engezantsi.
Izinto eziyimfuneko zabasebenzi bezinto ezenziwe ngezinto zemvelo - i-acorns kunye nama-chestnuts
i-chestnuts -2 ii-pcs.
ezongezelelweyo izinto zokwenza isicelo
Umyalelo wesinyathelo ngeyinyathelo kwimisebenzi yezenzi zemvelo (i-chestnuts kunye ne-acorns)
Njengoko kulula ukuqikelela, iifumba ziya kusetyenziselwa imilenze, kunye ne-chestnuts yezikhogwe zamakhowe. Ukwenza into enomtsalane ngakumbi, unokwenza uhlengahlengiso oluncinci kwezinye izinto zemvelo (ubomvu, i-rowan berries, njl.).
Ukusuka eplasiniyina sakha isiseko sefungus. Sizibophezele i-acorns ngokubhekiselele kwi-clearing.
Ngaphezulu kwe-acorn sidibanisa i-cake encane yeplastiki. Sizibophelela i-chestnut kuso.
Ukusuka ngasentla kuhlobisa i-chestnut kunye neengcezu ezincinci zeplastiki, ulingisa umbala we-fly agaric. Iinqwelo kunye namajikijolo ahlobisa ukucinywa.
Iingcweti zezingane ezisuka kwi-acorns kunye ne-plastiki ngezandla zabo, iklasi yeklasi kunye nevidiyo
Izandla ezenziwe nge-acorns, iplastiki kunye nezinye izinto zemvelo (i-chestnuts, i-nut, i-cones) kunye nezandla zabo zinegalelo elifanelekileyo ekuphuhliseni izakhono zezithuthi ezifanelekileyo kunye neendlela zokudala ezikolweni zombini kunye nasezikolweni eziprayimari. Ingakumbi imveliso yabantwana abenziweyo yenziwe ngama-acorns kunye ne-plasticine ngokwabo zifanelekileyo ekuwa. Enye yeendlela zokwenza umsebenzi wekwindla kunye neengqungquthela zabantwana ziya kufumana kwividiyo ezayo.
Fumana, sungula, fumana i-hobby
Iingubo eziqhelekileyo zokugaya iinaliti
Iincinci zeenwele zenziwe ngeetronbhoni ze-satin
Ithegi elivela kwiphepha elithi "Sunny ekuseni"
Ziziphi ukutya eziqukethe i-aphrodisiacs?
Isonka sesangqa kunye ne-walnut sprinkling
Indlela yokuqalisa ukulahleka kwesisindo: iingcebiso zesondlo sokutya, isazi sezengqondo
Ubudlelane phakathi kwamakhwenkwe namantombazana, amakholwa kunye nabangakholwayo
Iingqungquthela zengqondo: ukulungiswa okugqibeleleyo kwengqondo yakho
Imoto yahlaselwa yintoni: eli phupha lizisa ntoni?